Amathuluzi Ahamba Phambili Okumaketha Kwe-imeyili YeWoocommerce | Martech Zone
Woocommerce iyona ethandwa kakhulu futhi ngokusobala ingenye yama-plugins we-eCommerce amahle kakhulu we-WordPress. Kuyinto i-plugin yamahhala elula futhi eqondile ukusetha nokusebenzisa. Akungabazeki ukuthi indlela engcono kakhulu yokuvula i- WordPress iwebhusayithi ibe yisitolo se-e-commerce esisebenza ngokugcwele!
Kodwa-ke, ukuthola nokugcina amakhasimende, udinga okungaphezu kwesitolo se-eCommerce esiqinile. Udinga okuqinile isu lokumaketha nge-imeyili endaweni yokugcina amaklayenti bese uwaguqula abe ngabathengi abaphindayo. Kepha kuyini ukumaketha kwe-imeyili?
Ukumaketha nge-imeyili kusho isenzo sokufinyelela kubathengi nge-imeyili. I-imeyili isenayo i-ROI ehamba phambili kunoma yisiphi isiteshi sokumaketha. Empeleni, Inhlangano Yezokumaketha Eqondile ibika ukuthi ukumaketha nge-imeyili i-ROI ingama- $ 43 kuwo wonke amadola asetshenzisiwe, okwenza kube isiteshi sokumaketha esisebenza kahle kakhulu sokuthengisa ukuthengisa.
Ukumaketha nge-imeyili kusetshenziswa ku-ecommerce uku:
Hlola amakhasimende akho
Khulisa amakhasimende angakalungeli ukuthenga okwamanje
Thengisa kumakhasimende akulungele ukuthenga.
Thuthukisa imikhiqizo yabanye abantu (isb. Ukumaketha kokusebenzisana)
Shayela ithrafikhi kokuthunyelwe okusha / ibhulogi
Kungani iWoocommerce Iyipulatifomu Ephezulu Ye-eCommerce:
Woocommerce ingasetshenziswa ukuthengisa noma yini
Ipulatifomu ethembekile nephephile
Izinhlobonhlobo zama-plugins ongakhetha kuzo
Kuyashesha futhi kulula ukusetha
Ukukusiza ukuthi udale isu lokukhangisa nge-imeyili elihle kakhulu, sizokwabelana ngamathuluzi wokuthengisa ama-imeyili aphezulu ama-5; udinga ukwenza ukumaketha kwakho kwe-imeyili kuqhubeke. Ngakho ake siqale!
Amathuluzi Amahle Ama-5 Wokuthengisa Nge-imeyili kweWoocommerce
Leli ithuluzi lokuxhuma isayithi lakho kwi-Mailchimp, enye yezinsizakalo zokuthengisa ezithandwa kakhulu ze-imeyili ezitholakalayo. Leli thuluzi likwenza ukwazi ukwakha amafomu, ubuke ama-analytics, nokunye okuningi. IMailchimp inikeza abathengisi be-e-commerce amathuluzi adingekayo ukusiza ukuthengisa ukuthengisa. Ibuye ikuvumele ukuthi uvumelanise idatha yekhasimende lakho ne-oda ukuze wenze imisebenzi isebenze futhi uthumele imikhankaso eqondisiwe. Ingxenye engcono kakhulu? Kumahhala ngokuphelele! izici Key:
Dala amafomu wokubhalisa wangokwezifiso bese uwafaka kusayithi lakho le-WordPress
Hlanganisa nezinhlobo ezahlukahlukene zamafomu wokwakha amafomu nama-plugins e-commerce
Buka imibiko enemininingwane ngemikhankaso yakho
Thumela izaziso ezizenzakalelayo lapho ababhalisile abasha bebhalisa
I-Jilt iyipulatifomu yokumaketha ye-imeyili eyakhelwe zonke izidingo zezitolo ze-WooCommerce. Ngosizo lwale nkundla, ungathumela izincwadi zezindaba, izimemezelo zokuthengisa, ama-imeyili wokulandela okuzenzakalelayo, amarisidi, izaziso, nokuningi! Ungagxila kokuzenzakalela, ukuhlukaniswa, nama-imeyili wokuthengiselana, konke ngaphandle kokunikela ngekhwalithi yokuklama. Izici ezibalulekile zifaka:
Thumela isimemezelo sokuthengisa
Faka ukuthengisa okuthengiswayo nokuthengiswa kuma-imeyili.
Isegmenti esuselwe kukuthenga kwangaphambilini kusetshenziswa injini esegmenti ethuthukile
Phinda uthole imali ngama-imeyili wenqola ashiyiwe.
Imethrikhi yokusebenza enemininingwane yawo wonke ama-imeyili
Umklami we-imeyili omangalisayo, anamamojula wokudonsa nokudonsa
Qala Isivivinyo Sakho se-Jilt
I-Follow-Ups iyithuluzi elizokusiza ukuthi uhlanganyele kangcono namakhasimende akho ngokwakha imikhankaso eyinkimbinkimbi yokudonsa ngokuya ngezintshisekelo zomsebenzisi, nokuthenga umlando ukushayela ukuthengisa nokuzibandakanya okuphezulu, konke ngomzamo omncane kuziteshi eziningi zokumaketha. Izimpawu ezisemqoka zihlanganisa:
Khulisa okulandelwayo kube imikhankaso
Landelela inani lekhasimende
Thumela ama-tweets kuwe amathemba
Izibalo ezinemininingwane- (vula / chofoza / thumela / njll)
Dala futhi uphathe uhlu lwamakheli
Izifanekiso zamahhala nezenziwe ngokwezifiso
Amakhuphoni enziwe aba ngewakho
Ukuhlanganiswa kwe-Google analytics
Landa i-plugin ye-Follow-Ups
I-Omnisend iyithuluzi elihle kakhulu lokuklama ama-imeyili we-eCommerce azenzakalelayo nalawo. Ihlose ukusiza amabhizinisi e-eCommerce enze ukumaketha kwawo kuhambisane ngokuthumela imiyalezo eyenziwe yaba ngeyakho kumuntu ofanele, ngesikhathi esifanele, esebenzisa isiteshi esifanele. Isici sokudonsa nokudonsa sivumelanisa imikhiqizo yakho futhi sikuvumela ukuthi ufake imininingwane yomkhiqizo ezincwadini zakho zezindaba nasemikhankasweni ezisebenzelayo. Izici ezibalulekile zifaka:
Hlanganisa i-SMS, izaziso ze-web push, i-Facebook Messenger, nokunye okuningi kumxube wakho wokumaketha
Thumela umlayezo ofanele oya kukhasimende elifanele ngesikhathi esifanele, ngaso sonke isikhathi usebenzisa i-automation.
Dala izingxenye eziguquguqukayo ngokuya ngemibandela yakho
Ungavumelanisa oxhumana nabo kusuka ku-database yakho ye-WordPress.
Dala amakhasi okufika nezigelekeqe kalula.
Landelela ukusebenza kokuthengisa ngeziteshi ezahlukahlukene
Qala Isivivinyo Sakho Sokwengeza
I-Mailpoet iyithuluzi elibi kakhulu elinazo zombili izinhlobo zamahhala nezama-premium. Yipulatifomu yokumaketha i-imeyili ye-WordPress ekuvumela ukuthi wenze konke ngqo kusuka kudeshibhodi yakho ye-WordPress. IMailPoet ithi ithumela ama-imeyili amahle afinyelela emabhokisini okungenayo njalo futhi adale ababhalisile abathembekile. Ipulatifomu yenzelwe abanikazi besayithi abamatasa, ebasiza ukuba baqale ngemizuzu. Izici ezibalulekile zifaka:
I-MailPoet ine-plugin ye-WordPress eqondile.
Ungakha ifomu lokubhalisa, ulishumeke lapho uthanda khona kusayithi lakho.
Yakha ama-imeyili kusukela ekuqaleni noma ngokusebenzisa izifanekiso ezinhlobonhlobo
Setha uhlu lwababhalisile abahlukahlukene, futhi ulawule ngaphakathi kwe-WordPress
Thumela izaziso zokubhalisa okuzenzakalelayo futhi wamukele ama-imeyili.
Ngamathuluzi wokuthengisa we-imeyili afanele nama-plugins, ungaphatha kalula zonke izici zokumaketha kwe-imeyili ngqo kusuka ekwakhiweni kwefomu lokubhalisa, ukwakhiwa kwe-imeyili, ukuphathwa kohlu, ukulandelwa kwe-analytics, nokuningi - ngqo kusuka kuwebhusayithi yakho ye-WordPress. Ukudala nokuphatha ama-imeyili azenzakalelayo akukaze kube lula kangako, ngenxa yamathuluzi ashiwo ngenhla. Hlola amathuluzi, bona izici zawo nezinhlelo zamanani entengo ngaphambi kokukhetha ithuluzi elifanele wena.
Kunconywa ukuba neqembu labachwepheshe be-WordPress abavela kuma-ejensi athembekile afana Abaphezulu ngubani ongaqonda ubunzima bebhizinisi eliku-inthanethi. Bangakusiza ukwakha isitolo sakho se-eCommerce futhi bakusize uhlanganise wonke ama-plugins wokuthengisa we-imeyili adingekayo.
Ukudalula: Sisebenzisa izixhumanisi ezihambisanayo kule ndatshana.
Tags: inhlangano yokuthengisa eqondileezokuhweba ngekhompyuthaimeyili ye-ecommerceplatform ecommerceukuhlanganiswa kwe-imeyiliimeyili Marketingi-imeyili roiokulandelwayojilt imeyilii-mailchimpImeyiliPoetomnisendWooCommerce
USheryl uyiSr Marketing Marketing Specialist e-Uplers onolwazi olukhulu lokuklama uhambo lomsebenzisi oluchazwe kahle kulo lonke ulwazi lokukhangisa lwedijithali. Usebenzisa ubuchwepheshe bakhe bokumaketha edijithali ukusiza amabhizinisi ukudweba ama-ROI abalulekile.